Ngesikhathi esisodwa e-Israel, noma yikuphi ukuvakasha ngokushesha noma kamuva kuyaqonda: yonke imigwaqo iholela eJerusalema. Omunye wamadolobha amadala emhlabeni wonke akuyona nje inhloko-dolobha "yamaJuda" yezwe, kodwa futhi nenkolo engcwele yezinkolo ezintathu ezinamandla - ubuKristu, ubuJuda, ubuSulumane. Ukuzijwayeza nge "Heritage of Yahweh" kudingekile ukuqala kusukela eMadolobheni Endala - lesi sifundazwe somlando sihlukaniswe emigumbini emine "kazwelonke": amaSulumane, ama-Armenia, amaJuda namaKristu.
Idolobha elidala kusukela ekubukeni kwenyoni
Kulapha ukuthi izindawo ezinkulu zenkolo zaseJerusalema zigxilwe. Ibhodlo lokukhala liyindawo engcwele yabahambi abaningi: bayathandazela izisekelo zamatshe, babuze uMninimandla onke ukuthi axazulule ubunzima noma azindle nje.
Ibhulo lokulila eThempelini lethempelini yizinsalela zeThempeli Elidala LesiTestamente Elidala, okwathi kamuva libhujiswa ngamabutho aseRoma
I-Al-Aqsa Mosque kanye neDome of the Rock ayithandeki nje kuphela kubachwepheshe beKoran, kodwa futhi kubalandeli bokuzijabulisa kwezakhiwo. Izindlu nezigqoko ezihlotshisiwe, ezihlotshiswe ngendwangu eluhlaza okwesibhakabhaka, kusukela ekudumeni okubheka phezulu.
EDome of the Rock Mosque kukhona yesikhulumi samatshe - indawo yokukhuphuka komprofethi Muhammad
Enye indlela ye-Canonical yindlela YesiPhambano: indlela kaJesu endaweni yokubulawa eKalvari. Isonto eliphakeme lamaSepulcher Engcwele laba yisibonakaliso somhlatshelo kaKristu egameni lesintu.
Nge-Dolorosa: umgwaqo wesithukuthezi onama-stopon
I-altare leSonto le-Sepulcher Engcwele - ithuna lapho uJesu wangcwatshwa khona futhi wakhulela khona
Njengoba bekhathele ukucabangela izinto ezingokwenkolo, izivakashi zingangena ebuhleni obuhle bukaMahane Yehuda, zijabulele ubudlelwane nemvelo e-Biblical Zoo naseJardin of Gethsemane futhi zijabule izibani zokubonisa ubusuku embhoshongweni kaDavid.
UMahane Yehuda - "inhliziyo" yeJerusalema elihamba phambili
I-Zoo yeBhayibheli - ikhaya ngezinhlobo ezingamakhulu amabili zezilwane ezingavamile
Imihlobiso eyisishiyagalombili eNsimini yaseGetsemane "yesikhathi esidala" seplanethi: iminyaka yabo idlula amakhulu amabili eminyaka
"Imfihlakalo yasebusuku" - into ekhanyayo embhoshongweni kaDavid
Izingxenye eziyinhloko zohlelo lwe-spa
Kuyini isimo sezulu esilindeleke eMoscow ngoJulayi 2016. Isibikezelo sezulu esiteshini se-hydrometeorological eMoscow nasesifundazweni ngoJulayi
Silungiselela echibini sonyaka wokubhukuda: siphi indlela yokukhetha ukunakekelwa?
Isaladi nama-mushroom asemathinini
Turkey umhluzi nemifino
Mayelana nefilimu yase-Ksenia Borodina yangaphambili, ividiyo
Izinhlobo zamavithamini ezinomsoco
Ukubambisana, indlela yokwandisa ukugeleza ubisi
Indlela yokuhlanza ijaji lesikhumba?
Izakhiwo zemilingo ze-charoite
Yini okufanele umqambi wokuqala owaziyo futhi akwazi ukukwenza?
Biography of actress uLarissa Udovichenko
Isifuba sezinkukhu zethenda ebisi
Izibonelo zezingqungquthela ezingcolile zocansi
Usuku lokuzalwa lomdlali we-Dikaprio
I-Horoscope ngo-November 2017 - owesifazane uDeva - ovela eTamara Globa no-Angela Pearl
Amandla ombala ngaphakathi